Fahotana tamin'ny fototra - Wikipedia
Fahotana tamin'ny fototra
I Adama sy i Eva, sary nataon'i Jacques Joseph Tissot, 1896-1902.
Ny fahotana tamin'ny fototra, araka ny teolojia kristiana, dia ny fahadisoana voalohany nataon'ny olombelona ka niteraka ny fahalavoany, dia ny fahotan'i Adama sy Eva niseho tao amin'ny saha Edena, izay nanimba ny toetran'ny taranak'olombelona rehetra ka mitarika azy amin'ny ratsy mandrakariva. Atao hoe "fahotana voalohany " na "fahotan'i Adama" koa izany. Manondro ny fandikana ny didin' Andriamanitra nataon'i Adama sy Eva, araka ny fitantarana ao amin'ny Bokin'ny Jenezy (Jen. 2-3), tamin'ny nihinanan'izy ireo ny voan'ilay "hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy". Ny fahafatesana no vokatr'izany fahotana izany.
Tsy hita ao amin'ny Baiboly ny teny hoe "fahotana tamin'ny fototra" nefa ny fampianarana momba izany dia ankinina amin'izay voasoratra ao amin'ny Baiboly, toy ny hita ao amin'ny Bokin'ny Jenezy (Jen. 2.16-17), ny Bokin'ny Salamo (Sal. 51), ny Epistilin'i Paoly (Romana 5.12-21; 1Korintiana 15.22), ny Epistilin'i Joany (1Joany 5.9) ary ny Evanjelin'i Lioka (Lio 11.13). Ao ambadik'io fampianaran'ny Testamenta Vaovao io dia misy ny fomba fijerin'ny soratra apokaliptika jiosy.
↑ "Ary Jehovah Andriamanitra nandidy an-dralehilahy ka nanao hoe: Ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao ihinanana ihany; fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana; fa amin'ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao." (Genesisy 2.16-17, Ny Baiboly)
↑ "Fa tahaka ny ahafatesan'ny olona rehetra ao amin'i Adama no ahaveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'i Kristy." (1Kor 15.22, Ny Baiboly)
↑ "Raha mandray ny fanambaran'ny olona isika, lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra; fa ny fanambaran'Andriamanitra dia ny nanambarany ny Zanany." (1Jao 5.9, Ny Baiboly)
↑ "Koa raha ianareo, na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy mainka va ny Ray, Izay any an-danitra, no hanome ny Fanahy Masina ho an'izay mangataka aminy?" (Lio 11.13, Ny Baiboly)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahotana_tamin%27ny_fototra&oldid=997529"
Voaova farany tamin'ny 6 Oktobra 2020 amin'ny 07:08 ity pejy ity.